▷Chiitiko chikuru chegore negore, misika huru uye chiitiko chekugadzira, pakati pezvirongwa zvevhiki ino muMadrid | Ruzivo ZVINO【 2022 】
1. PaChiratidzo cheBhuku
0.1 1. PaChiratidzo cheBhuku
1 Kudyira pedyo
1.1 2. Dzokera kuMatadero Market
2 musika wakawanda
2.1 3. Kurarama mabasa emaoko kwenguva refu
3 Mamwe matinji akakosha
3.1 4. The (yemahara) museum hwindo
Chinyorwa chitsva cheBhuku Fair chinosvika, chatove nenguva.
Kupera kwesvondo rino panosvika chinyorwa chitsva cheBook Fair. Mushure mekupedzisira mumasikisi uye kutonga kwekugona, nemitsara yakareba yekupinda, vakaita kuti zviwedzere kuoma, zvinotarisirwa kuti kugadzwa uku kuchava, zvakare, mutambo wezvinyorwa uye chirongwa chikuru muEl Retiro. .
Pachave, panguva ino, nhamba ye81 yezvakanaka uye yakakura maererano nekutora chikamu kwezana rino remakore, yakazara 378 matumba uye vanopfuura 400 varatidziri. Inopembererwa senguva dzose mune inodaidzwa kuti Paseo de los Coches mupaki, inova mugwagwa wayo mukuru, nekupinda nemuPuerta de Madrid, muO'Donnell, pakati peChishanu 27 naChikumi 12, Muvhuro kusvika Chishanu kubva 10.30. a.m. kusvika na14:17.30 p.m. uye kubva na21.30:15 p.m. kusvika 17:XNUMX p.m., uye pakupera kwevhiki zvakatonyanya kureba, sezvo neMugovera neSvondo zvitoro zvinongovharwa masikati kubva naXNUMX:XNUMX p.m. kusvika naXNUMX:XNUMX p.m.
Gwaro regore rino rakasainwa naIsaac Sánchez.
Dingindira rinoti 'Bhurawuza pasirese', uye ndizvo chaizvo zvinotenderwa nechiitiko ichi: kusangana nezvinyorwa zvitsva nevanyori vazvo, kusaina mabhuku ikoko uye kubuda nevaverengi vawo, asiwo nekuwana mazita uye misoro yekwakabva kwakasiyana. Mambokadzi achapinda, pachava neruremekedzo kune mushakabvu Almudena Grandes naDomingo Villar, maworkshops nehurukuro, comedians uye ecology ... Chinhu chakanakisisa ndechokusarudza kupinda uye kurega iwe uchishamisika, kana kusarudza chiitiko kuti uzviratidze iwe pachako. .
Pamberi peiyi mukova weRetiro neBhuku Fair pane nzvimbo muMadrid yaunongoda kuziva: Imba yeArabhu, uko zviitiko zvetsika nemimhanzi zvinogara zvakarongeka uye mune chivanze chayo chakanaka - chinobatanidza Alcalá neO' Donnell, ane musuwo pamativi ese - kunwa chinwiwa kunogona kuve kwakanaka. Pachiitiko chezvinyorwa, pane rondedzero dzemuromo uye maforamu emumigwagwa pamazuva aya, mukutenderera kwayo 'The Thousand and One Nights of the Book Fair kuCasa Árabe', semuenzaniso Chishanu chino neMugovera.
Imba yeArabhu yeMadrid.
Kana zviri zvemabhuku, vanyori uye miti inoshamisa yepaki kwechinguva, uye ipapo kudya munzvimbo, pedyo zvikuru ndeye: imwe yeresitorendi yeboka reSushita, Le club Sushita, chirongwa cheJapan chekusanganiswa pasina kunyanyisa uye mhepo yakanaka kwazvo. , yakakwana kuenda neshamwari, instagramers uye 'vanotonhorera' vanhu (C/Alcalá, 63).
Kune zvakare Berría ichangoburwa, ine teresi hombe pamberi pePuerta de Alcalá (Plaza de la Independencia, 6), iri 'bhawa rewaini', uye saka yakakosha kune vanoda waini yentendre. Kana iyo yemhando yepamusoro kunyangwe yakagadziridzwa Bribón, mukona yakanyarara kuseri inorema panzvimbo yayo (Alcalá, 54), yakanakira kuenda nevabereki.
Iyo Bareto nyowani, munzvimbo yaive ine mukurumbira muMadrid muma20s.
Verenga zvakare kuti uone chimwe chinhu chiri padyo uye nenzira yekuziva kamuri yake nyowani Bareto, iri paimbove ngano Cervecería Correos (Alcalá, 55). Iyo cañí tavern, ine doro rinotonhora uye yakanaka tapas pabhawa rayo, iyo ikozvino yawedzerwa neBareto Chikafu House, kugara patafura uye kunakidzwa nemidziyo yechinyakare ine ndangariro dzenhoroondo yayo refu uye mavara eChizvarwa chemakumi maviri nenomwe. akamushanyira. Iyi nzvimbo nyowani yakashongedzwa zvakare pakuvhurwa uku naAlejandra Pombo.
2. Dzokera kuMatadero Market
El Matadero ichadzoreredza kugadzwa kwayo pamwedzi nevagadziri venzvimbo.
Mugovera uno, Chivabvu 28, iyo Matadero de Madrid inozopedzisira yadzoreredza musika wevagadziri vayo. MuMatadero Musika mune 70 vatengesi vezvekudya zvakarimwa, zvakasimudzwa kana kugadziriswa muNharaunda, uye yakasarudzika nzvimbo yezvipenyu.
Guta riri munharaunda yetsinga yehupenyu hwetsika uye imwe nzira diki iripo muguta guru, muPlaza del Matadero (nemusuwo wePaseo de la Chopera, 14; Legazpi metro) Mugovera wese neSvondo (11 am kusvika 17 p.m.) ) maawa), nekubvumidzwa kwemahara.
Musika uyu unotsvaga kumisa nzvimbo yekutengesa yakananga pakati pevagadziri venzvimbo nevatengi uye, zvakare, kusimudzira chikafu chemuno, kudya kune hutano uye kuongororwa kwebasa revarimi, mapurazi, maartisans nevamwe vatengesi venzvimbo. Kuchava nenyama kubva kuSierra de Guadarrama; michero, miriwo nemiriwo kubva kuNharaunda; ice creams; chokoreti uye pastries; chingwa chakaoma; kusvuta uye soseji; uchi nemazai; waini uye cheeses. Uyezve, nzvimbo yekudya.
Musika weMatadero muchange muine misangano yevana nemashoo. Kana chirongwa chikadonha, kana iwe uchida kufamba zvishoma, nzvimbo yeMadrid Río iri padyo, ine masiraidhi ayo seanokwezva vadiki uye mafambiro ayo uye materras kuti munhu wese afare.
Kune avo vanonzwa kufara pakati pezvitoro nematende, vhiki ino kune dzimwe sarudzo muMadrid. Kune rimwe divi, iyo yechipiri edition yeAntiques uye Decoration Market inobatwa muLas Rozas. Iri panzvimbo dzayo, Chishanu chino 27 uye Mugovera 28 kubva 11 am kusvika 21 p.m., nekubvumidzwa kwemahara, uye dzakasiyana siyana fenicha, zvekushongedza zvinhu, tableware uye art.
3. Kurarama mabasa emaoko kwenguva refu
Madrid Craft Vhiki ndiyo musana wemashopu ehunyanzvi uye kuratidzira.
Kupera kwevhiki ino Madrid inova, yakawedzerwa kune ese ari pamusoro, guta guru reumbozha hunyanzvi, nemhemberero yeMadrid Craft Vhiki (kubva neChishanu chino, uye kusvika Chikumi 5).
Ichi chiitiko chinounza pamwechete zviitiko zvakasiyana munzvimbo dzakasiyana, kubva kuzvitoro nemahotera vanobatana nechirongwa ichi (vanodarika mazana maviri pamwe chete) kuenda kuThyssen kana Coam. Mune yekare kuchava nemazuva akazaruka uye marudzi ose emasangano ekukoshesa mhizha yavo uye mabhizimisi maduku emunharaunda: kubva pakusungirirwa kwebhuku uye maruva, kusona, hati, zvishongo kana ceramics. Pano purogiramu yekusarudza chirongwa.
Mumahotera eumbozha mamwe maworkshop anoitwawo. Mugovera uno musi wa28, mbiri dzakanyanya: imwe yekugadzira zvishongo, naKaren Hallam (chinyorwa! Ndiye mugadziri wering inodiwa naQueen Letizia) paFour Seasons, na18:12 p.m., uye imwe yehembe naAlexia Álvarez de Toledo. paGreat English Hotel, kumaXNUMX.
Mumwe wevanotsigira svondo rino remabasa emaoko, Cervezas Alhambra, ine hurongwa hwayo hwekuita uye michato munzvimbo dzakasiyana siyana munharaunda yeLas Letras, iyo yakabhabhatidza 'nzvimbo isingamhanyirwe' kuti ibatane nechikumbiro ichi.
Iyo museum, kune chikamu chayo, ichatsaurira kuratidzwa kune mhizha uye Coam ichaita musika, asi zvese izvi zvichange zviri musi wa4 uye 5th, saka isu tichapa tsanangudzo svondo rinouya muAgenda ino.
Mamwe matinji akakosha
Rimwe remaguta ane zviratidzo uye ekare muMadrid anonongedza svondo rino re "craft" iCapas Seseña, iyo icharatidza zvimwe zvidimbu zvayo zvakakosha paThe Westin Hotel kutanga Mugovera uno 28, nekubvumidzwa mahara. Iwe unogona kuona muhoro yekugadzwa, semuenzaniso, iyo 1901 capes (gore iro shoka yekugadzira yakavambwa, iyo pritas yaipfekwa nevarume vakuru vakaita saPicasso, Heminway, Baroja, Mastronianni kana Fellini, pakati pevamwe) kana kudzoreredzwa. Nicole.
Capas Seseña, chitoro chepakutanga chiri kuCalle de la Cruz, 23.
Munzvimbo imwe chete, muchiitiko ichi neMuvhuro 30 na13.30:XNUMX p.m. uye zvakare nekuwana mahara, kuratidzira kwekucheka kwecape kuchaitwa.
4. The (yemahara) museum hwindo
Iyo yakanakisa yemazuva ano art, paReina Sofía Museum.
Manomano ekugadzira chirongwa chakaderedzwa kutora mukana wezvirongwa nekubvumidzwa mahara kumamyuziyamu makuru eMadrid (kuve nemoyo murefu kune mitsetse), nekuti dzimwe nguva vagari veguta guru ndivo vasingazive aya magaraji emifananidzo nekuti ivo gara unazvo neruoko… uye usazoenda pakupedzisira.
Muchiitiko chePrado, hwindo iroro rinovhurwa kubva Muvhuro kusvika Mugovera na18:17 p.m. uye neSvondo naXNUMX:XNUMX p.m.; muThyssen inguva yeMuvhuro wose.
Pamwe iyo isinganyanyi kushanyirwa nevakawanda, nekuda kwekuve kure nePrado-Recoletos axis yemazuva ano, ndiReina Sofía, muAtocha, uye uko Picasso, Dalí, Juan Gris, Miró uye humwe huwandu hukuru hwehunyanzvi hwemazuva ano hunopotera vakasununguka. Ikoko, chirongwa chikuru chekupera kwevhiki chinogona kunge chiri kutora mukana wemahwindo ekubvumirwa kwemahara uye kunwa chinwiwa mushure mune mbiri dzayo dzakabudirira kwazvo gastronomy zvirevo.
Kutanga pakutanga: kupinda pachena munyaya iyi kuri musi weMugovera kubva na19:21 p.m. kusvika 12.30:14.30 p.m. uye neSvondo kubva na13:XNUMX p.m. kusvika XNUMX:XNUMX p.m. Kupeta loop, neSvondo unogona kutora mukana uye kujoinha, naXNUMX pm, iyo yakatungamirwa rwendo zvakare yemahara kune avo vari mukati memuseum, iyo art inohwina kana paine mamiriro uye kufungisisa.
Wobva washanyira imwe yemaresitorendi ayo maviri: Nubel, ine ruvara rwemazuva ano runako, uye Arzábal, ine chigadzirwa chikafu.
Tera rezhizha reReina Sofía.
Asi iko zvino chinonyanya kunakidza kutora mukana wemateru ayo achangovhurwa. Panyaya yeArzábal, pane patio izere nezvirimwa nemarambi inowanikwa kuburikidza neCalle Santa Isabel, uko nzvimbo iyi iri muchivako cheSabatini museum. Kune chikamu chayo, icho cheNubel, kona ine musuwo weArgumosa uye iri muNew Patio yemuseum, chirimo chinouya nenhau. Uye ndezvekuti nzvimbo iyi yakabhabhatidzwa se'Zhizha' uye inopa chiitiko chechirimo chakatenderedza chipfupi edition cocktail ine nyowani 'Martin Miller's Summerful Gin', yakakosha menyu (49 euros) inoenderana neEngland-Iceland duality inotsanangura iyi gin, mimhanzi kubva kuna DJ uye yakawanda yemhepo.
Sánchez anosangana nhasi naMacron parwendo rwake rwekuEurope ku…
Castilla y León anowedzera zviuru zviviri nemazana mashanu nemakumi maviri ezviuru zveCovid uye makumi maviri neshanu ekufa ...
Gurukota rezvemitemo reNharaunda yeMadrid, Enrique…
Iyo PP inokumbira kutambura nekuderedzwa kwemutero wemuhoro wega kune vanozvishandira ...
Chii chinonzi VAT Fomu 390 yegore?
Tenga wepagore kuronga ⊛ Pane ino webhusaiti iwe unowana zvese…
Champions League | PSG - Real Madrid: Hupenyu hwaRamos mu…
Escrivá inoronga kuti makambani anoiwana ichidhura…
Categories Noticias Tags agendamadridsaturday28sunday29may Kubatikiti kufamba
Spain Legal Expo, nzvimbo yekusangana yebazi rezvemitemo uye bhizinesi · Nhau dzeMutemo